Guta rePlattsburgh Rinorambidza Kuchera Mining Bitcoin uye Mamwe maDhijitari edhora | Gadget nhau
Plattsburgh Inova Guta Rekutanga Kurambidza Bitcoin Mining
Iyo cryptocurrency fivha inoita kunge isati yasvika kumagumo izvozvi. Sezvo vazhinji vashandisi vachiramba vachichera yangu Bitcoin nedzimwe mari dzemadhijitari. Chinhu chiri kukonzera matambudziko uye gakava mune dzakawanda zviitiko. Sezvazvakaitika muguta rePlattsburgh mudunhu reNew York. Sezvo guta rave rekutanga kurambidza cryptocurrency mugodhi.
Vhoti yakaitwa mukanzuru yeguta. Muvhoti yakataurwa, muchibvumirano, zvave zvakadaro cryptocurrency kuchera kunorambidzwa kwemwedzi gumi nesere inotevera. Chimwe chezvikonzero zveichi chisarudzo isimba rakakura rekushandisa iro danho rinoita.
Mumashoko a meya pachake, Colin Verenga, guta rine imwe yemitero yemagetsi yakaderera pasi rose. Chinhu chakakurudzira vacheri veBitcoin nedzimwe mari kuti vashandise guta senzvimbo yavo yekuchera. Sezvo iyo mari yemagetsi inova yakaderera zvakanyanya.
Panyaya yePlattsburgh, anenge masendi e4.5 pa kilowatt-awa anobhadharwa. Ivhareji muUnited States inenge gumi masendi. Saka iri pasi pehafu. Uye zvakare, iro guta rine mutengo wakasarudzika wemakambani anoshandisa zvakanyanya magetsi. Mune zviitiko izvi, masendi maviri anobhadhariswa. Chinhu icho vatambi veBitcoin vakada kutora mukana.
Kutaura zvazviri, Coinmint ikambani yakatsaurirwa kuBitcoin migodhi ndokugara mutaundi rePlattsburgh. Pakati paNdira naFebruary iyo kambani ine 10% yesimba rese reguta rakadyiwa. Muenzaniso wehuwandu hwesimba hunoshandiswa nemaitiro aya. Naizvozvo, kanzuru yeguta yatora danho mushure mekunge vagari vanyunyuta pamusoro pekukwidzwa kwemitengo pamabhiri avo.
Kubva zvakapihwa kudyiwa kweBitcoin kuchera, guta raifanirwa kutenga magetsi pamusika wakavhurika, iyo inodhura zvakanyanya. Chinhu chakakonzera mari inodhura kune vanogara mudhorobha. Naizvozvo, ivo vanoita iyi sarudzo uye kucherwa kweBitcoin uye mamwe ma cryptocurrencies anosara yakarambidzwa kwemwedzi gumi nemasere inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Technology » Cryptocurrencies » Plattsburgh Inova Guta Rekutanga Kurambidza Bitcoin Mining
General Electric Aviation inobudirira kuyedza kuti ndeipi ichave injini huru yepasi rese yendege
MIT inotenda kuti fusion yenyukireya inogona kunge yakagadzirira mumakore gumi chete